Iimveliso zeplastiki zeplastiki zeepliglass kunye nababoneleli - Iimveliso zamaphepha e-plexiglass factory
Iishiti zePlexiglass ziza kuluhlu olubanzi lobungakanani kunye nobukhulu. Iimpawu zecwecwe le-acrylic zibandakanya: Ukuzinza, ukucaca, umgangatho ongaguquguqukiyo, ukwenza izinto ngokungafaniyo, ukumelana nemozulu, ukukhanya kunye nokukhuseleka, ukumelana ne-UV, ukumelana neMichiza kunye nokusebenza okungagungqiyo. Amashiti e-acrylic anokuhambisa ukukhanya okugqwesileyo-kucacile kuneglasi! Ayizukujika ityheli emva kokuvezwa lilanga ixesha elide.
Khangela iplexiglass enganyangekiyo
Ukukhangela i-plexiglass enganyangekiyo kubhekisa kwi-plexiglass enobunzima obuphezulu bomhlaba, ukumelana ekuqaleni. Iipropathi ezibonakalayo, iipropathi zoomatshini, kunye nokumelana nemozulu ziphantse zafana ne-plexiglass yesiqhelo. Ubunzima bomphezulu buphezulu, ukuxhathisa ekuqaleni, ukumelana nokukrwela, kunye nokumelana neekhemikhali.
1.Ukucaca ngokugqibeleleyo kunye nokuhanjiswa kokukhanya nge-93%.
3. Iiplastiki ephezulu, Ukuqhubekeka nokubumba kulula.